နက်ရှိုင်းသောမြေကြီးတပြင်ကိုရွှေစကင်နာ (MS-6350) China Manufacturer
ဖေါ်ပြချက်:အဆိုပါသတ္တု detection,ဂျုံး Allen ကသတ္တု detectors,သတ္တု Detector Fisher က
Home > ထုတ်ကုန်များ > မြေအောက်သတ္တု Detector > မြေအောက်ရွှေ Detector > နက်ရှိုင်းသောမြေကြီးတပြင်ကိုရွှေစကင်နာ (MS-6350)
အဆိုပါ MD-6350 သီးသန့်ပစ်မှတ် ID ကိုနည်းပညာနှင့်မူပိုင်ခွင့်ခွဲခြားဆက်ဆံမှု features တွေပါဝင်သည်။ ဒီနည်းပညာကိုသင် detector`s ခွဲခြားဆက်ဆံမှုဆက်တင် (အောက်ပိုင်းစကေး) အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်တစ်ဦးချင်းစီကိုတွေ့ရှိပစ်မှတ် (အထက်စကေး) ၏ဆန်းစစ်ကြည့်ဖို့ခွင့်ပြုနှစ်ခုညွှန်ပြချက်အကြေးခွံပါရှိပါတယ်။ အဆိုပါ MD-6350 ကိုလည်း Enhanced သံဆုံးဖြတ်ချက် (ရှုပ်ပွနေအောင်ဒေသများရှိသံ junk ကနေနှစ်လိုဖွယ်ပစ်မှတ်ခွဲထုတ်ဘို့အပိုဆောင်း resolution ကို) တပ်ဆင်ထားနှင့်တစ်ဦးစံ 8.5 ကပိုစိန်ခေါ်မှု mineral မြေဆီလွှာထဲတွင်အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်မှုများအတွက်အင်ဂျင်နီယာဘဲဥပုံကို Double-D ကိုရှာဖွေရေးကွိုင် "11 ×" ။ သတ္တုစုံထောက်
3. ပစ်မှတ် ID ကို cursor (အထက်စကေး) ရတာဟာပစ်မှတ် ID ကို cursor သည်ပစ်မှတ် ID ကိုဒဏ္ဍာရီဇာတ်လမ်းများနှင့် တွဲဖက်. တစ်ဦးရှာဖွေတွေ့ရှိပစ်မှတ်များ၏ဖြစ်နိုင်ခြေဝိသေသလက္ခဏာဖော်ပြသည်။ အထက်စကေးပစ်မှတ် ID အတှကျတဆယ်နှစ်လုံးကို (12) ဂရပ်ဖစ် segments များပါဝင်ပါသည်။ သတ္တု detector Fisher ။ မြေအောက်ကိုရွှေ detector ။
4. အောက်ပိုင်းစကေး-အဆိုပါအနိမ့်စကေး, ဒါမှမဟုတ် Notch ခွဲခြားဆက်ဆံမှုစကေးသည်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုပုံစံဖော်ပြသည်။ အဆိုပါ MD-6350 ရက်တွင် switched သော pixels ကိုများအတွက်အသံထှကျပစ်မှတ်တုံ့ပြန်မှုများနှင့်ပိတ်ထားခဲ့ကြသောသူတို့အဘို့အဘယ်သူမျှမကွားနိုငျတုံ့ပြန်မှုထုတ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါပစ်မှတ် ID ကို cursor အမြဲအားလုံးပစ်မှတ်ညွှန်ပြပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါခွဲခြားဆက်ဆံမှုပုံစံသည် Modes ပြောင်းလဲနေတဲ့နှင့် / သို့မဟုတ် DISCRIM အသုံးပြု. ချိန်ညှိနှင့် / ငွငျးပယျ (√ / ×) pushbuttons Accept နိုင်ပါသည်။ နက်ရှိုင်းသောရှာဖွေရေးမြေအောက်ကိုရွှေ detector ။
အဆိုပါအကြွေစေ့၏အတိမ်အနက်ကို, သို့မဟုတ်အလားတူအရွယ်ပစ်မှတ် Indicator- 5. အကြွေစေ့အနက်,2လက်မနှစ်တိုးများတွင်ညွှန်ပြနေသည်။ အများဆုံးတိကျစာဖတ်ခြင်းရဖို့မြေဆီရှာဖွေရေးကွိုင် 1 လက်မနှင့်အတူပစ်မှတ်ကိုကျော်သွားပါပြီ။ garrett ကိုရွှေ detector, မြေအောက်ရွှေ Detector ။
အဆိုပါသတ္တု detection ဂျုံး Allen ကသတ္တု detectors သတ္တု Detector Fisher က စျေးပေါသတ္တု detectors မုဆိုးသတ္တု Detector အားလုံးသတ္တု Detector ကြေးနီသတ္တု Detector အသေးစားသတ္တု Detector